तर अफसोच ! आज न उनीहरु छन्, न त व्यवसाय नै - Awajonline Online Newspaper
तर अफसोच ! आज न उनीहरु छन्, न त व्यवसाय नै
आवाज संवाददाता १९ भाद्र २०७३, आईतवार
(लामावगर)दोलखा, भदौ १८/तामाकोशी नदी किनारमा लहरै बनेका ४ ओटा घर । घर मास्तिर कहाली लाग्दो भिर । नजिकै तामाकोशी नदी तर्ने पुल । यही पुल तरेर गौरीशंंकर गाउँबासी र त्यहाँ जाने पर्यटकहरुको आउजाउ । तिनैलाई लक्षित गरेर नदी किनारमा व्यवसाय गर्दै आएका उनीहरु । तर अफसोच ! आज न उनीहरु छन् न त व्यवसाय नै ।
माथिल्लो तामाकोशी जलबिद्युत आयोजना बनिरहेको दोलखाको लामावगर गाउँस्थित आयोजनाको पावरहाउस रहेको स्थान गोंगरदेखि बाँधस्थल पुग्ने सडक खण्डको छेउबाट गौरीशंकर तर्ने पुलवारि तामाकोशी किनारमा बसेर गुजारा चलाउँदै आएका यिनै गाउँलेको जीवनमा बुधबारको रात बज्रपात आइलाग्यो । बर्षौँदेिख किनारमा बसेर खुसी साथ धान्दै आएको जीवनमा कहिल्यै नभुल्ने कहर बनेर गयो बुधबारको मध्यरात । बस्तीभन्दा झण्डै डेढ किलोमिटर माथिको लेकबाट ठाडो भिर हुँदै झरेको पहिरोले बस्ती नै तामाकोशीमा मिसाइदियो ।
घरमाथि लेकबाटै खसेको ठाडो पहिरोले बस्ती बगाएर तामाकोशीमा मिसाएका कारण लामावगर गाविस ४ को छ्योतछ्योत बस्तीका २ जनाको मृत्यु भयो । ५ जना तामाकोशी नदीमा मिसिए वा कता गए नामोनिसान छैन् । बुधबार राती पुरिएका उनीहरु मध्ये २ जनाको शव सुरक्षाकर्मीले बिहिबार बिहान निकाले पनि अन्य हराइरहेका छन् ।
घटनामा बाबु आमा, भाइ, बहिनीसहित परिवारका ६ जना सदस्य गुमाएका बिक्रम तमाङ रोइरहेका छन् । बिहिबार घटनास्थलमा भेटिएका बिक्रम भक्कानीरहेका थिए । उनका अनुसार बुधबार उनी काममा गएका थिए ।
बस्तीभरिमा बिक्रमका बाबु छोरा र स्थानीय मिनबहादुर ठकुरीको २ ओटा गरेर ४ घर थिए । बिक्रमको घरमा श्रीमती लालमाया, छोरी लक्ष्मी र भाइ बडुले बस्थे भने बाबु मंगले श्रीमती पतमायासँग छुट्टै घरमा बस्दै आएका थिए । छिमेकी गाउँमा बिबाह गरेकी मंगलेकी छोरी तिर्सा एक महिनाअघि काखको छोरा लिएर माइत आएकी थिइन् । मंगलेकी सासु सतमाई पनि छोरी ज्वाइँ भेट्न मंगलबार मात्र मंगलेको घर आएकी थिइन् ।
तर बुधबार रातीको पहिरोले घरमा सुतेका मंगले दम्पती सहित छोरी तिर्सा र १८ महिनाको काखको छोरो छेसाङलाई घर सँगै बगाइदियो । साथै पाहुना बरेर छोरी ज्वाइँ भेट्न आएकी सासु सतमाई पनि पहिरो सँगै बगिन् ।
यस्तै बिक्रमको घरमा बुधबारको रात उसकी श्रीमती लालमाई, छोरी लक्ष्मी, भाइ बडुले सुतेका थिए । सोही रात श्रीमान ससुराली गएकाले छिमेकी पेममाया पनि बिक्रमको घरमा लालमायासँग बस्न आएकी थिइन् । पेममाया स्थानीय मिनबहादुर ठकुरीको घरमा पसल चलाउदै आएकी थिइन् ।
बुधबार रातीको पहिरो जाँदा बिक्रमको घरमा सुतेका उनीहरुमध्ये लालमाया र छोरी लक्ष्मी जसो तसो भागेर ज्यान जोगाउन सफल भए । उनीहरु राती करिब ३ बजेसम्म भिरमुनि ओढारमा बसेर ज्यान जोगाएकार थिए । तर एउटै घरमा बसेका पेममाया र बडुले भने पहिरो सँगै मिसिए ।
पेममाया र बडुलेको शव सेना प्रहरी र सशस्त्रको टोलीले निकाले पनि अन्य वेपत्ता छन् । जिल्लाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी रविन कार्कीका अनुसार वेपत्ता भएकाहरुको बिहिबार विहानैदेखि खोजी गरिए पनि शुक्रबार अवेरसम्म फेला पर्न सकिएको छैन ।
बिक्रमको घरमा पुरिएकाहरुको शव निकालिए पनि मंगलेको घर बगाएर तामाकोशी नदीमा पुर्याई घरको नामोनिसान नभेटिएकाले मंगलेको घरमा सुतेकाहरु फेला पार्न नसकिएको कार्कीले बताए । उनीहरु तामाकोशी नदीमा बगेको आशंका जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरुको छ ।
वेपत्ता भएकाहरुको खोजी गर्न शुक्रबार समेत दिनभर नेपाली सेनको रणभीम गण, माथिल्लो तामाकोशी जलबिद्युत आयोजनाको सुरक्षार्थ बसेको सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले दिनभर उद्धारको प्रयास गरे पनि उनीहरु भेटिएका छै्रनन् । तामाकोशी नदी आसपासका क्षेत्रहरुमा शुक्रबार समेत उनीहरुको खोजी गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी कार्कीले जानकारी दिए ।
पहिरोपछि बाँचेकाहरु सुरक्षाकर्मीहरुले बनाइदिएको एउटा पालमा बसेर गुजारा चलाइरहेका छन् । आफूहरुका लागि उचित राहतको ब्यबस्था नभएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।